Ny 9 Best Vienna Hotels 2018
Tsy afaka manapa-kevitra ny amin'izay hijanonany? Ny lisitra dia hanampy anao hahita ny torimaso tsara indrindra any Vienne
Raha vao renivohitry ny Empira Austro-Hongroà, dia tranom-bakoka velona i Vienna, ary feno trano fanontana fanta-daza momba ny tantaran'i Habsburg. Ny Habsburgs dia nanamboatra ny lalana ho an'ireo mponina malaza any Vienne, anisan'izany i Sigmund Freud, mpiorina psychonaalista, sy Mozart, Beethoven ary Schubert. Mankanesa any Viena mba hijoro manoloana ireo zavakanto malaza manerantany ao amin'ny galería Albertina na manasa ny kafe Vienne sy Sachertorte ao amin'ny café iray izay mijery ny reniranon'i Danube. Na inona na inona antony mahatonga anao hitsidihana, mijanona ao amin'ny iray amin'ireo hotely tsara indrindra eto an-tanàna. Ao anatin'ity lahatsoratra ity, dia mijery safidy maro isan-karazany isika, avy amin'ny boutique azo itokisana amin'ny teti-bola ara-tsosialy ara-tsosialy.
Ny hotely dimy kintana Sans Souci Wien dia ankafizin'ny mpitsidika any an-drenivohitr'i Aotrisy - araka ny fanamarihany ambony indrindra amin'ny TripAdvisor. Miorina eo amin'ny sisin'ny MuseumsQuartier, maneho ny lova ara-javakanto ao amin'ny faritra ao anatin'ny rindriny manokana izany. Mandehana mamakivaky ny mofomamy vita amin'ny fampakaram-bady fotsy ao amin'ny galerie fanandramana manokana nataon'ny tompon-trano Norbert Winkelmayer, miaraka amin'ny hevi-dehiben'ny asa soratra nataon'i Lichtenstein sy Picasso. Ny trano fandroana dia singaingan-tsarin'ny vanim-potoana ankehitriny sy antitra. Ary ny fanompoana? Tsy misy dikany ny fanamarinana mba hijery.
Ny efitrano sy efitrano rehetra dia natao hampiononana sy ny fomba. Andrasana tsara ny môtôra, sakafo menus, fantsona boribory mahavariana ary Wi-Fi maimaim-poana maimaim-poana. Ny sakafo maraina koa dia tafiditra ao ary misy ny fielezan'ny voankazo voajanahary, ny mofo sy ny atody ary ny atodina indrindra mba handraisana. Mandritra ny andro sisa dia alao ny sakafo maoderina indrindra any Austria any amin'ny tranokala Veranda. Ny Bar Bar dia misy karazam-borona samihafa miavaka, raha ny spa ao amin'ny basement dia toerana masina vita amin'ny sokatra sy ny dobo filaminana anaty lelafo.
Eo amin'ny sisin'ny valan-java-malaza any Vienne, ny Prater, magdas Hotel dia safidy tokana ho an'ny mpizarazara ho an'ny mpiasam-bola miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana ara-tsosialy. Manome asa sy fanamafisana ho an'ireo mpitsoa-ponenana izy, saingy manana tontolo manerantany ho an'ny vahiny. Miara-miteny amin'ny fiteny 23 ny mpiasan'ny hotely. Misy trano 88, manan-danja sy mahafa-po avokoa izy ireo miaraka amin'ny fitaovana sy fitaovam-pambolena novolavolain'ny Academy of Fine Arts.
Ho an'ny fijanonana ara-toekarena indrindra, misafidiana Classic Double Room. Tsy misy fanodinkodinana (raha te-hijery ny fahitalavitra ianao dia afaka manofa takelaka iray avy amin'ny fandraisana), fa tsara ny fandriana, ny trano fidiovana misy trano fidiovana ary ny Wi-Fi dia afaka. Ny sakafo maraina dia manolotra kafe sy tantely tsy manjary amin'ny trano lay ho eny an-tafon-trano. Misy zaridaina tsara tarehy misy sarimihetsika misokatra ety ivelany, raha ny salon kosa dia toerana fivoriana miavaka miaraka amin'ny bar, kafe ary fanovozan-javakanto. Alao sary an-tsaina ny hetsika mozika mivantana.
Avy ao amin'ny The Guesthouse Vienna, dingana vitsy monja mankany Albertina, andian-tantara malaza manerantany, izay miorina amin'ny lapa lehibe indrindra ao Habsburg. Ny tsenam-bokatry ny trano fivarotana ho an'ny tenany manokana ho toy ny "trano lavitra any an-trano" - ary marina izany, mihevitra fa ny tokantranonao dia karazana faniriana sy fanatsarana. Ilay tompon'ny britanika Sir Terence Conran dia nahomby tamin'ny famelomana ny Guesthouse amin'ny fomba tsotra sy mampivelatra.
Ny efitrano 39 dia ahitana rafitra fialambolin'ny Bang & Olufsen, efitra fandroana ary solosaina masira iray. Ny zava-dehibe indrindra, ny kalitaon'ny divay iray ao anaty efitrano dia manasitrana anao amin'ny divay, ny labiera ary ny zava-pisotro maloto. Mankanesa any amin'ny efitrano avo kokoa ho an'ny toeram-pisakafoanana sy ny fomba fijery mahavariana momba ny mari-pamantarana toy ny Opera sy St Stephen's Cathedral. Ny sakafo maraina isan'andro dia serviette à restaurant brasserie & bakery, miaraka amin'ny lisitry ny tavoahangy avy amin'ny haisoratra Okraniana sy Frantsay.
Tsara indrindra ho an'ny fianakaviana: Boutiquehotel Stadthalle Wien
Ny Boutiquehotel Stadthalle Wien dia mpifankatia maharitra 15 minitra miala eo afovoan-tanàna, akaikin'ny trano fialan-tsasatra Schönbrunn sy Zoo. Ny toerana mangina dia fitahiana ho an'ny fianakaviana tanora; Na dia tsara aza ny fifandraisana amin'ny fifamoivoizana, dia mitazona ny tsara indrindra amin'ny fahitana any Vienne. Ny tokotanin'ny trano sy ny zaridaina dia manome fahafahana be dia be ho an'ny fikambanam-pianakaviana al fresco, raha mbola manampy zava-baovao amin'ny fahavaratra ny zaridaina lavarava lavender.
Ny efitrano fiantsenan'ny fianakaviana dia ahafahana manana fiainana manokana miaraka amin'ny efitrano roa misaraka. Ankizilahy mahafinaritra dia ahitana boky hosodoko, kitapo nify iray ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ary fahitalavitra satelita ho an'ny sarimihetsika alohan'ny hatory. Cribs dia azo atao rehefa mangataka. Ireo ankizy latsaky ny enim-bolana dia maimaim-poana maimaim-poana, fa ny taham-pivarotana ho an'ny ankizy zokiny dia manampy anao hitazona ny fialan-tsasatra ao anatin'ny teti-bola Ny hotely dia manolotra buffet miara-misakafo sy trano fisakafoanana maromaro eo akaiky.
Voahodidina horonan-tsary ao amin'ny distrikan'ny MuseumsQuartier, ny Hotel Altstadt Vienna dia safidy amam-pihetseham-po ho an'ireo mpivady tia kolontsaina. Ny tranobe dia manomboka amin'ny taona 1902, fa ny fialamboly dia fankalazana ny eclecticism ankehitriny. Eo amin'ny làlana mankany amin'ny efitrano iray na efitrano misy anao manokana, atsaharo ny hankalaza ny hatsaran'ny Warhol sy Liebowitz. Ny efitrano rehetra dia mampihetsi-po amin'ny vahiny amin'ny minibar, ny milina Nespresso sy ny toetrandro malina Malin + Goetz.
Ho an'ny fitsangatsanganana ankafiziko indrindra anefa, ny fanavaozana ny efitranon'ny rano amin'ny trano fidiovana iray sy ny faritra midadasika akaiky. Ny buffet mahafinaritra mahavariana ao amin'ny hotely dia manompo hatramin'ny faramparan'ny fotoana, ka mamela anao ny famaranana ny maraim-be mandreraka miaraka am-pandriana. Mitandrema amin'ny dite sy ny mofomamy misy alokaloka isaky ny tolakandro, ary zarao ny takelaka kely kely sy divay tsara amin'ny alàlan'ny famokarana ao amin'ny Red Salon.
Ny hotely dimy kintana Sacher Wien no tompon'antoka ho an'ny tany efa ela tany Vienna. Nandehandeha haingana tao amin'ny lapa tamin'ny taonjato faha-13 ny Hofburg, tahaka ny trano fonenan'ny mpanjaka izy - misy lantotr'ireo kristaly, satroka mainty sy sary hosodoko. Nandritra ny taona maro, dia nitarika azy ireo ho an'ireo tia an'i JFK sy ny Queen Elizabeth. An-trano an-telefaona ao amin'ny efitrano dia ahitana fahitalavitra ao amin'ny efitrano fandroana sy serivisy 24 ora.
Ny Penthouse Presidential Suite dia mamela ny fahaleovantenany amin'ny ambaratonga vaovao. Manantena zavakanto malaza, onjam-pisokisana ary trano mafana tsara tarehy miaraka amin'ny fomba fijery tsy hay hadinoina. Ny safidy fisakafoanan'ny hotely dia mahatalanjona ihany koa. Ao amin'ny Rote Bar, ankafizo ny fomba nentim-paharazana Viennese nentim-paharazana sy mozika piano mivantana na head to Blaue Bar ho an'ny cocktail pre-opera. Ny spa dia ahitana foibe ara-pahasalamana sy sainam-pirenena.
Any amin'ny morontsiraka avaratry ny reniranon'i Danube, ny Sofitel Vienna Stephansdom dia dingana kely avy amin'ireo trano bara sy klioba tsara indrindra ao an-tanàna. Ho an'ireo mpihomehy marobe, dia misy ihany koa ny fomban-tany amin'ny zony manokana. Ny trano fandraisam-bahinin'ny trano faha-18 Ny trano fisakafoanana LOFT sy ny baran'ny LOFT dia mamiratra amin'ny panoramasiana ao an-tanàna. Manomboka ny fankalazana ny hariva miaraka amin'ny Michelin Plate-fanomezana sakafo atolotra alohan'ny hamafazana ny lisitry ny divay mahavariana. Ny djs mivantana dia manampy amin'ny rivodoza amin'ny alakamisy sy zoma, mitazona ilay antoko mandeha hatramin'ny 2 maraina. Ny trano fandraisam-bahiny Vienne koa (lavorary ho an'ny fifohazana amin'ny andro manaraka), ary koa ny spa mahafinaritra. Rehefa alina, ny efitranom-bahiny sy ny efitrano dia manasa anao hitsidika miaraka amin'ny Wi-Fi maimaim-poana, rafi-pandehan'ny Bose ary dobo fandroana fandroana.
Ny trano fisakafoanana ety am-piadanana ety am-piandohana dia manolotra toerana tsara ao afovoan-tanàna. Na dia eo aza ny bikany, ity trano fandraisam-bahiny mahaleotena ity dia mitodika amin'ireo mpandraharaha miaraka amin'ny Wi-Fi haingam-pandeha maimaim-poana sy efitra roa natokana ho an'ny mpanatrika. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia afaka mandray 35 solontena. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia natao hanina, miaraka amin'ny biraon'ny asa fivelomana, ny fiarovana ny solosaina ary ny TV satelita amin'ny famaranana amin'ny hariva. Ny varavarankely misy rihana tokana sy kiraro matavy dia miantoka ny torimaso tsara. Aorian'ny asa, dia ambarao ireo mpiara-miasa aminao amin'ny fotoam-pifaliana sangisangy sy antipasti ao amin'ny Café Bar Aragall. Ny fananana hafa mahasoa dia ahitana efitrano fisakafoanana sy sauna.
Any andrefan'ny tanàna afovoan-tanàna ary ao anatin'ny halaviran'ny MuseumsQuartier, Schreiners Essen und Wohen dia trano fanevan'ny Vienne nentin-drazana miaraka amina trano fandraisam-bahiny ary fanompoana feno hatsaram-panahy. Dimy monja dimy monja no ao, ary misy balkon na terra mirakotra ny zaridaina. Ny fampiononana dia misy fandriana lehibe, cable TV, milina kafe Nespresso ary akanjo mafana. Ny sakafo maraina dia atolotra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny nomena ny B & B. Ny takarivam-pisakafoanana dia misy labiera na divay aoriniana miaraka amin'ny lovia klasika vita amin'ny fampiasana tsara indrindra ao an-toerana sy ara-potoana.
Romance of Vienna ao amin'ny sary
Altalsee Salt Mines Guide | Ny Tendrombohitra ny Harena
Aiza no hialanao any Aotrisy
Vienna Gay Pride 2016 - Vienna Rainbow Parade 2016
Vignette Aotrisy: The Tax Road Austria and Toll Sticker
Lake Hallstatt, Aostralia Guide
Torolalana ho an'ny toerana fanaovana fampisehoana any amin'ny District of Columbia
Fampahalalana momba an'i Clint Eastwood ao amin'ny "Gran Torino" sy Hmong ao Detroit
Ny Torolàlan'ny RV ho an'ny Speedway International Daytona
The Best Vacation Vacation Vacation in Oregon
Firy ny ranomandry any Albuquerque?
Ny toerana tsara indrindra ahafahana manala fono sy divay rehefa mitsidika an'i Londres
Mahafinaritra ny rano: lakandrano sy rano eny amoron-dranomasina any Paris
Arizona State Capitol Map and Directions
Ahoana ny fomba hahafantarana, sy hitondrana ary hampihenana ny hafanana mangatsiaka
Tsiambaratelo 10 maniry any Tokyo Disney
3 andro amin'ny Burnet
Fety sy zava-nitranga tamin'ny volana Janoary tany Italia